Apple Watch Series 6 oximeter -ka ayaa waxtar u leh xayeysiisyada marka loo eego daraasad | Wararka IPhone
La salud waxay noqotay dhidib-gooyn ah oo lagula shaqeeyo aaladaha guurguura. Apple way ogtahay tan iyo sanado badan aalado iyo teknolojiyad gaar ah ayaa la soo bandhigay si loola socdo caafimaadka isticmaalaha aaladooda. Tusaalaha tan ayaa ah soo bandhigidda nidaam lagu sameeyo elektrokardiogram -ka Apple Watch Series 5. Sanadkii la soo dhaafay, oo la socday Apple Watch Series 6, ayaa la soo bandhigay oximeter -ka si loo qiyaaso buuxinta ogsijiinta dhiigga. Daraasad ayaa shaaca ka qaaday in Wax -ku -oolnimada cabbirkan oo ka timaadda saacadda caqliga leh ee Apple waxay si aad ah ugu xiran tahay cabbiraadda laga helo oksimeter -ka ganacsiga.
Daraasad ayaa muujineysa waxtarka Apple Watch Series 6 oximeter
Heerka ogsijiinta dhiiggaaga (ama buuxinta) ayaa ah tilmaame muhiim u ah ladnaantaada guud. Waxay kaa caawinaysaa inaad fahanto haddii jirkaagu nuugo oksijiinta lagama maarmaanka ah iyo sida loo qaybiyo. Taxanaha Apple Watch 6 waxaa ku jira barnaamij aad u cusub iyo dareeme, kaas oo cabbiri kara kulaylkaaga oksijiinta waqti kasta. Saacadani waxay daryeeshaa inaad si fiican u shaqayso, habeen iyo maalinba. 1
Daraasadda ayaa lagu daabacay joornaalka sharafta leh Nature 23 -kii September. Waa maqaal lagu daabacay magaca: «Isbarbar -dhigga SpO2 iyo Qiimaha Heerka Wadnaha ee Apple Watch iyo Oximeter -ka Ganacsiga caadiga ah ee Bukaannada qaba Cudurada Sambabka ».
Isticmaalayaasha IPhone 13 waxay soo sheegaan khaladaadka furitaanka Apple Watch
Tijaabadu waxay ku lug lahayd 100 bukaan oo qaba cudurka sambabka xanniba oo dabadheeraad ah (COPD) ama cudurada sambabka dhexdooda (ILD). Cuduradan habdhiska neefsashada waxay u baahan yihiin a la socoshada buuxinta ogsijiinta dhiigga maxaa yeelay heerarka sare iyo kuwa hooseba waxay wax u dhimaan xakamaynta cudurrada. Taasi waa sababta inta badan bukaannadan ay guriga ugu leeyihiin oksimeter ganacsi.
Daraasadu waxay isku dayday inay xaqiijiso waxtarka Apple Watch Series 6 oximeter iyo kormeeraha garaaca wadnaha marka la qaadayo qiimahan waxaa la isku dhejinayaa qiyamka lagu helay cabirrada caadiga ah iyo cabbiraadda garaaca wadnaha. Ugu dambayntii, natiijadu waxay muujisay in cabbirrada saacaddu ay ficil ahaan la mid tahay cabbirrada labada dareemayaal, iyagoo soo gabagabeynaya kuwa soo socda:
Natiijooyinkayagu waxay tilmaamayaan in Apple Watch 6 ay tahay hab lagu kalsoonaan karo oo lagu heli karo garaaca wadnaha iyo SpO2 ee bukaannada qaba cudurka sambabka ee xaaladaha la kontoroolo. Horumarka teknolojiyadda smartwatch ayaa sii wanaajinaysa waana in daraasado la sameeyaa si loo qiimeeyo saxnaanta iyo isku halaynta noocyada kala duwan ee cudurrada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch Series 6 oximeter -ka ayaa waxtar u leh xayeysiisyada marka loo eego daraasad
Aqoonsiga wajigu wuu joogsanayaa haddii aad shaashadda iPhone 13 ku beddesho mid aan asal ahayn